‘जनैपूर्णिमाको दिनमात्र जनै लगाउँछु’ « Mero LifeStyle
‘जनैपूर्णिमाको दिनमात्र जनै लगाउँछु’
सुमित्रा लुईंटेल	|| 22 August, 2021
जनैपूर्णिमालाई हिन्दुहरुको एक विशेष चाडको रुपमा लिइन्छ । विभिन्न ठाउँ चलन तथा धार्मिक परम्पराअनुसार यस पर्वलाई फरक–फरक ढंगले मनाइन्छ । ब्राम्हण तथा क्षेत्रीहरुका लागि यो पर्व विशेष महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस दिन बिहानै उठेर स्नान गरी शुद्ध भई भगवानको पूजा आराधना गरी मन्त्र जप गर्दै जनै फेरिन्छ र रक्षा बन्धन बाँध्ने गरिन्छ । यसरी हिन्दुहरुले विशेष महत्वका साथ मनाउँदै आइरहेको चाड जनैपुर्णिमा अभिनेता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेतले कसरी मनाउँदै आएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर मेरोलाइफस्टाइलकर्मी सुमित्रा लुईंटेलले उनीसँग गरेको कुराकानी :
आज जनै फेर्नुभयो ?
कोरोनाको कारण केही आफन्त गुमाएका छौ । घरमा जुठो परेको कारणले यो वर्ष जनै फेरिन । तर, सामान्य अवस्था हुँदा वर्षेनी यो पर्व मनाउँथे । त्यस्तो विशेष त केही पनि हुँदैन । जनै फेर्ने, दिदी बहिनिहरुसँग रक्षा बन्धन गर्ने र क्वाँटी खाएर मनाउने हो ।
तपाईंको व्रतबन्ध कहिले भएको हो ?
कक्षा ९ मा पढ्दा व्रतबन्ध भएको थियो । त्यतिबेला हामी झापामै थियौं । व्रतबन्धको बेला अरु कुरा त रमाइलो नै लागेको थियो, तर कपाल खौरिए पछि म चिन्डे हुन्छु भन्ने कुराले साह्रै दुःख लागेको थियो । त्यसैले कपाल नकाटी व्रतबन्ध हुँदैन भनेर पनि सोधेको थिएँ । सबैले खौरिनै पर्छ भनेपछि मैले हारेँ ।
पहिलोपटक जनै लगाउँदाको अनुभव कस्तो थियो ?
व्रतबन्धको दिन पहिलो पटक जनै लगाउँदा त रमाइलो नै लागेको थियो । सानै थिएँ । त्यसैले पनि होला त्यत्ति धेरै याद त छैन । कपाल खौरिने चिन्ता बाहेकका अरु कुराहरु त रमाइलो नै लागेको थियो ।
जनै सधैं लगाउनुहुन्छ ?
अँह लगाउँदिन । जनैपूर्णिमाको दिन मात्र लगाउँछु । त्यसपछि लगाउँदिन ।
जनैपूर्णिमाको दिन लगाएको जनै त्यही दिन फुकाल्दिनँ । त्यो जनै रहुन्जेल रह्यो । त्यो फुकालेपछि भने अर्को जनै फेर्दिनँ । किनभने, कामको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ, हिन्दू धर्मले बन्देज लगाएका खानेकुराहरु खाइन्छ । त्यसैले लगाउँदिन ।
व्रतबन्धको बेला दिक्षा मन्त्र दिने गुरुसँग कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन ?
झापामै हुँदा व्रतबन्ध भयो । त्यसैले मलाई कसले मन्त्र दिनुभयो नै थाहा छैन । अब जनै नलगाउने भएपछि नियमित मन्त्र जप गर्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले मन्त्र दिने गुरु नै याद भएन ।
तपाईंलाई जनैपूर्णिमाको महत्व थाहा छ ?
जनै पूर्णिमा किन माइन्छ भन्ने सहि अर्थ त मलाई थाहा छैन । तर, यस दिन शुद्ध भएर जनै फेर्दा र रक्षाबन्धन बाँध्दा शरीर र आत्मा शुद्ध हुन्छ भन्ने सुनेको छु । यस दिन क्वाँटी खाने चलन पनि छ । स्वस्थ मानिसले क्वाँटी खानाले प्रोटिनको मात्रा पुग्छ । शरीर पुष्ट हुन्छ । मौसमअनुसार शरीरको तापमान ठीक रहन्छ भन्ने मान्यता छ । साथै, आत्माको शुद्धीकरण र शरीर रक्षाका लागि पुरोहितको हातबाट नाडीमा रक्षाबन्धन बाँध्ने र जनै फेर्ने गरिन्छ भनेर सुन्दै आएको छु ।
युवा पुस्ताले यो पर्वलाई कसरी मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
पहिले देखि हाम्रो पुर्खाहरुले मनाउँदै आएको यस चाडलाई नयाँ पुस्ताले पनि अपनाउनुपर्छ । एक पुस्ताको परम्परा अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण भएमा मात्र संस्कृति जोगिन्छ । त्यसैले जसले जति जानेको छ, जसरी जानेको छ त्यसरी नै यो चाडलाई निरन्तरता दिनु राम्रो हो ।
जनैपूर्णिमाको अवसरमा अन्तिममा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
सम्पुर्णमा जनै पुर्णिमाको धेरै–धेरै शुभकामना । अहिले कोरोनाको समय भएकाले सबैजनाले सचेत भएर आफ्नो कला संस्कृतिलाई जोगाउनु होला र जनैपूर्णिमा मनाउनु होला भन्न चाहन्छु ।
#अभिनेता तथा निर्देशक